संसदमा सांसदको प्रश्न : प्रधानमन्त्री ओलीज्यू ३५ हेक्टर नेपाली भूमि भारतलाई सुम्पने योजना हो ? « Janata Samachar
संसदमा सांसदको प्रश्न : प्रधानमन्त्री ओलीज्यू ३५ हेक्टर नेपाली भूमि भारतलाई सुम्पने योजना हो ?
काठमाडौं । भारतले दार्चुलाको महाकाली नदीमा निर्माण गरिएको तटबन्ध सम्पन्न भएपछि नेपालको ३५ हेक्टर भूमि भारततिर पर्ने देखिएको छ ।
यसरी नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा भारतले तटबन्ध निर्माण गरिरहेकोमा सरकारले मौन सहमति गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदमै प्रश्न उठाएको छ ।
मंगलवारको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसद्हरूले महाकालीको तटबन्द निर्माणका क्रममा भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएकोेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सीमा क्षेत्रमा निर्माणधिन तटबन्धबारे नेपाल सरकार र गृहमन्त्रालय बेखबर रहेको बताउनुभयो । सांसद बडूले दार्चुलामा भारतले नेपाली भूमिलाई भारततर्फ पार्ने गरी भइरहेको निर्माणको विरोध गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो । दार्चुला सदरमुकामको गल्फै गाउँमा नेपाल सरकारको जानकारीबिना भारतले एकतर्फी ढंगले नेपाली भूमि आफूमा समेटेर तटबन्ध बनाइरहेको तर सरकारको तर्फबाट कुनै सुनुवाइ नभएको उहाँले बताउनुभयो । सांसद बडूले ३५ हेक्टर नेपाली भूमिमा भारततिर जान लागेको बताउनुभयो । उहाँले तत्काल उक्त भूमिमा निर्माण कार्य रोक्न माग समेत गर्नुभएको छ ।
यस्तै, सांसद् जीप छिरिङ लामाले भारतको अतिक्रमणमा परेको भूभागलाई समेटेर सरकारले नक्सा प्रकाशित गरेपनि अहिलेसम्म भूमि फिर्ता नभएकोप्रति असन्तुष्ट जनाउनु भएको छ । संसद बैठकमा बोल्दै सांसद् लामाले नयाँ नक्सा समेटेर सरकारले आफूहरूलाई लोगो मात्र दिएको तर भूमि फिर्ताका लागि पहल नगरेको बताउनु भयो ।